Habeeyey takhasuska Waxbarashada Jirdhiska Job Description / Meelaynta Oo Template Waajib – JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Habeeyey takhasuska Waxbarashada Jirdhiska Job Description / Meelaynta Oo Template Waajib
superadmin June 28, 2016 Uncategorized 1 Comment 422 Views
Sii tababarka waxbarashada dhabta ah habka ama xal carruurta, dhalinyarada, ama grownups Hawadooda waxaa dhab ah gaar ah oo sabab u ah naafada ah oo dheeraad ah ama socod-dhac koritaan.
farsamooyinka Qaadaadhig habeeyey ama baakadaha waxbarashada jirdhiska si loo hubiyo waafaqsan isticmaalaya sharciyo kala duwan ama Dowladda.
Hel ama dalbaday marsho waxbarashada jirdhiska, raad farsamooyinka caadiga ah.
Abuur dib u eegista ay u soo koobaan shaqeynayaan ardayga, horumarinta bulsho ah, ama horumar dhab ah.
Ka qaybgal ee tababarka adeegga, fasalo, ama kulannada inay sii updated of farsamooyinka la joogo in aqoonta jirka loo habeeyey ama sifooyin,.
Keena ama qabsato fikradaha waxbarashada shakhsi (IEPs) ku saabsan ardayda dhibaatooyinkiisu cerebral ama jirka.
Supply shaqsiyaadka-celinta waa wanaagsan si ay u-iyo kicin caawiso inay abuuraan faham ku saabsan waxbarashada dhabta ah.
Bixi qofka ama qaybaha yar ee shakhsiyaadka isagoo ku habboon tababarka tababar jireed in uu dhergiyey doonayo rabitaanka jireed ama ujeedooyinka.
Diyaari tabaha cashar waafaqsan xeeladaha waxbarashada shaqsiga (IEPs) oo ay weheliyaan xirfadaha ama baahida ardayda waxtar leh.
Xafid ardayga waa diiwaanka dhamaystiran si aad qoraal u hagaajinta, ama shaqo, ku lug, damaanadna gaarka ah ee diiwaanka oo dhan.
Joogtee stock ee alaabta, alaabta, ama qalabka tababarka.
Qiimee shuruudaha motor ardayda gaarka ah si aad u ogaato ay ku tiirsanyihiin shirkadaha tababarka ku habboon in ay yihiin jirka.
Aqoonso iyo ilaaliyaan shuruudaha anshaxa si ay u abuuraan ammaan, habsami, iyo jawi awood waxgarashada.
Ula xidhiidha indhaynta dhaqanka iyo waxbarashada horumarka ardayga waalidiinta, barayaasha, ama fududeeya.
codsiyada tababarka jirka ah ayaa ku adeegsaday gacan ka baaritaanka ama haynta ardayda.
falanqeeyaan shakhsiyaadka’ hagaajinta ama baahida dhabta ah.
Ku dhiiri geli xirfadlayaasha aqoonta ardayda’ talanti dhabta ah ama dhibaatooyinkiisu iyo sidoo kale qolalka loo baahan yahay si loo wanaajiyo waxtarka awood ay.
Beddel tababarka farsamooyinka bartayaasha in ay ku darajo xirfad iyo da'da.
xal waxbarashada jirdhiska ayaa la isticmaalay by siiyaan shaqsiyaadka dhibaatooyinka lafaha, dhibaatooyinka maskaxda autism, ama hadyada meejeeda, curyaamisay kala duwan.
U sheeg shakhsiyaadka, shaqaalaynta dhaqanka waxbarashada loo isticmaalo in ay ahaayeen jirka, si kor loogu qaado xirfadaha gross motor-, conditioning, xirfadaha motor garasho, ama ciyaaraha fudud iyo hanashada cayaaraha.
Akhrinta weedho Aqoonta-fahamka iyo cutubyada diyaariyey waraaqo shaqo la xiriirta.
Active Dhagaysi-Bixinta dhan focus on waxa kale-oo qof ayaa leh, waqti ay ku ogaadaan waxyaabaha qaadashada la-macmalay, weydiimo weydiinaya sida ku habboon, oo aan mesmerizing at jeer in ay khaldan yihiin.
Daabacaadda-macaamilka wax ku ool ah oo qoraal ah ma aha sida aan habboonayn ee shuruudaha suuqa.
Xariirinta la-hadalka dadka kale u gudbiyo xogta si hufan.
Xisaab-Dalbashada xisaabta si uu u xaliyo arimaha.
farsamooyinka Science-Dalbashada iyo siyaasadaha kiliinikada si ay u xalliyaan arrimaha.
Sababta ka fakaraya-Adeegsanaya Halis iyo ku fikiray inaan ku arko liito iyo xirfadaha fursadaha kale ah, Natiijada ama habab in dhibaatooyin.
Active-Learning-fahmidda ka dib lugaha ula xaqiiqooyinka in waa cusub labada go'aan qaadashada xalinta dhibaatooyinka hadda jira iyo mustaqbalka iyo.
Barashada Qaababka-shaqaalayn iyo qaadaaya waxbaridda xeeladaha / tutorial iyo hababka haboona dhibaatada waxbarista ama marka hanashada arrimo cusub.
Hubinta-Hubinta / Go'aaminta waxtarka naftaada, dadka in ay yihiin kala duwan, ama hay'adaha ay qaadaan talaabooyin sixid ah ama in ay soo saaraan uqaadineed.
Social Perceptiveness-In ka dhawrsada jawaabaha othersI iyo fahamka sababta ay fal sababtoo ah waxay samayn.
Qancinta-xaadh kuwa kale si ay u hagaajiyaan tallaabooyinka ama garashadoodii.
Xalinta Khilaafaadka-qaadashada dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
Tababarka-aad bartid dadka kale sida saxda ah inay u dhaqaaqdo.
Company Orientation-ahaantii doonaya habab si loo caawiyo shakhsiyaadka.
Advanced dhibaato xalinta-Kala dhibaatooyin adag iyo cilmi baarista xaqiiqooyinka la xiriira codsan jawaabaha iyo baaro iyo si ay u horumariyaan fursadaha.
Ganacsi Research-Kormeerida u baahan tahay iyo baahidii waxsoosaarka loo sameeyo design a.
Engineering Design-Engineering si ay u caawiyaan qofka iyo marsho sameynta ama abuuray wuxuu u baahan yahay.
Qalabka Selection-Go'aaminta nooca qalab iyo qalabka loo baahan yahay si ay u fuliyaan shaqada ah.
baakadaha ku rakibidda-rakibidda, mashiinada, taararka, ama qalabka si ay u qanciso shuruudaha.
Horumarinta-Qorista codsiyada computer sababo jira oo kala duwan.
Hawlgallada cabirrada Monitoring-Galitaanka, burooyinkoodii, ama tilmaamayaasha kala duwan si loo hubiyo in mashiin waxaa hadda wax ku ool ah oo ka hawlgala.
Shaqeynaya iyo Maamul-Maareynta hawlaha nidaamka ama qalabka.
Qalabka Dayactirka-fulinta dayactirka joogtada ah ee qalabka iyo go'aaminta marka iyo waxa sort of adeegyada lagama maarmaan noqon doonaan.
arrimo dhib-Go'aansiga dambeeya qaladaad in ay yihiin socda iyo doorashada waxa jihada si ay u tagaan oo ku saabsan.
barnaamijyada ama waxyaabaha loo adeegsado hababka lagama maarmaanka ah soo celinta-Daboolid.
baadhitaanka iyo jeegaga alaabta Tayada-Control Research-fulinta, shirkadaha, ama nidaamyada si ay u qiimeeyaan wax ku oolnimada ama aad u fiican.
Talada iyo go'aan qaadashada-la eego lacagta u dhigma iyo waxyaalo waaweyn oo ku saabsan tallaabooyinka laga yaabo in ay u doortaan mid ka mid ah in uu yahay ugu haboon.
Systems Falanqaynta-Garashada waxa sort of habka waa in ka shaqeeyaan iyo sida beddelka ee dhibaatooyinka, hawlaha, iyo jawiga saamayn karaa natiijada.
Hababka Qiimeynta-Go'aaminta tallaabooyinka ama calaamadaha waxqabadka nidaamka iyo sidoo kale marka loo eego bartilmaameed qalabka saxda ah ama tallaabooyinka loo baahan yahay si loo kordhiyo ka shaqeynayaan.
Timemanagement-qabashada mid ka mid ah ayaa xilligan u gaar ah.
Hawlgalka of Financial Resources-Go'aansiga sida lacag caddaan ah waxaa loo isticmaali doonaa si ay u bartaan shaqada dhammeeyo, iyo iibka kharashka kuwan.
Kormeerka ee Maandooriyaha Resources-loo sheegay oo logu vayna ku haboon ee qaybaha, shirkadaha, iyo qalabka loo baahan yahay in la sameeyo shaqo cayiman.
Kormeerka Shaqaalaha Resources-Building, Waxyoon, iyo shakhsiyaadka ku hogaamiyay halka ay ka shaqeeyaan, la aqoonsado dadka waawayn ay ugu shaqo in.
In ka badan 1 sanadkii, up-to laba sano oo ay ka mid yihiin,
Shaqo Command Skills Shuruudaha
Dhibaatada la xidhiidha Qaar kale – %
Pingback: Outsourcing Small Business For More Profits - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Nasj, BoomBoom)